TTSweet: ကြားရ ကြားရ နားဝမသက်သာ
Posted by T T Sweet at 1:28 PM
မေလေး October 13, 2009 at 1:41 PM
ကိုယ်တိုင်လဲ ကြူံခဲ့ဖူးလို့ သိပါတယ်
The Queen October 13, 2009 at 6:02 PM
တကယ်ကိုစိတ် မချမ်းသာစရာ ပါလားနော်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကပဲ သတင်းစာဖတ်ရင်း ဗမာ အိမ်ဖော်တွေ ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ ကြေညာထားတာတွေ့လို့ စိတ်ညစ်မိသေးတယ်။
Unknown October 14, 2009 at 3:25 AM
who say the world will be peaceful if u just pray? u all r just funny...
pray hard for democracy.. ok?
Doughnut IO October 17, 2009 at 6:43 PM
အခု အဲဒီ လင့်ခ်မှာပါတဲ့ ကေ့စ်ကို ရဲက လူသေမှုမဟုတ်ပဲ လူသတ်မှုနဲ့ အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလို့ တရားရုံးရောက်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ စင်ကာပူထုံးစံ အမှုသေချာမှပဲ သတင်းစာမှာ ပါမယ် ထင်မိကြောင်း။